De Ligt oo dhageysanaya dalabaadka Barcelona, Juve oo halkaas fursad ka eeganeysa, iyo sida ay Barca u xallin doonto xaaladda Neymar iyo Lautaro – Gool FM
(Barcelona) 26 Abril 2020. Waxaa lagu soo warramayaa in kooxda Barcelona ay kula jirto Juventus wada-xaajood ku aaddan difaaca dhallinta yar ee Matthijs de Ligt, kaasoo doonaya qudhiisa in sheekadaas ay guuleysato sida lagu helayo wararka ka imaanaya dalka Spain.
20-jirkan ayaa sanad ka hor iska diiday ku biirista kooxda Barca, balse hadda waxa uu diyaar u yahay dhageysiga dalabaadka kaga imaanaya kooxda ka dhisan Catalonia, xilli uu qarsan waayay jaceylka uu u qabo ciyaarista Blagrana.
Sida laga soo xiganayo Mundo Deportivo, Barcelona ayaa dadaalkii ugu dambeeyay u galeysa soo xero gelinda De Ligt, waxayna kaga faa’ideysanaysaa xiisaha ay Juve u qabto laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee Arthur.
Kaddib ku biiristiisii Allianz Stadium ee xagaagii hore, difaaca xulka qaranka Netherlands ayaa si adag ku billawday nolosha horyaalka Serie A inkastoo uu si joogto ah u ciyaaro wadnaha dhexe ee difaaca Bianconeri, balse waa uu ka soo dhalaali waayay qiimihii ku kacayay ee ahaa 67.8 milyan oo gini.
De Ligt ayaa 27 kulan u saftay kooxda Talyaaniga ka dhisan xilli ciyaareedkan ka hor inta aanan loo joojin kubadda cagta xanuunka coronavirus oo dunida si xooggan ugu fiday.
Juventus ayaa dooneysa inay ku faro-adeegto sii heysashada laacibkan iyadoo dooneysa inay ka dhigto dhaxalka Giorgio Chiellini, tii oo ay jirto in qandaraaskiisa ay ka harsan tahay afar sano.
Dhanka kale, u dhaqaaqista Barca ee saxiixa De Ligt ayaa noqonaya bartilmaameedkooda saddexaad ee suuqa xagaaga, iyagoo diiradda saaraya soo xero gelinta weeraryahankoodii hore ee Neymar Jr iyo laacibka Inter Milan ee Lautaro Martinez.
Labada ciyaaryahan ee ka soo jeeda Koonfurta Ameerica ayaa ugu sarreeya diiwaanka xiddigaha ay Barca u tukaameysi tageyso suuqa xagaaga, sidaas darteed, kabtankii hore ee Ajax ayaa sugi doona inta ay Barca xal waara kaga heleyso xoojinta safkeeda weerarka.